အသက်၂၀ ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးချော ရွှေမှုန်ရတီ
16 May 2018 . 3:05 PM
ရွှေမှုန်ရတီ ဟာ လူမှုကွန်ရက် Facebook ထက် သူမရဲ့ Instagram အကောင့်ပေါ်မှာ ပုံတွေကို ပိုတင်တာတွေ့ရပါတယ်။ သူမ ဟာ အသက်ငယ်တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့်လို့ အနုပညာအရည်အချင်းကတော့ ဝါရင့် အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လိုသရုပ်ဆောင်ပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ မေလ ၁၆ ရက်နေ့မှာေ ရွှမှုန်ရတီ ရဲ့ အသက် ၂၀ ပြည့်မွေးနေ့ကို အောင်ဇမ္ဗူတောရကျောင်းတိုက်မှာ အလှူပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။။ ရွှေမှုန်ရတီဟာ မိခင်ဖြစ်သူနဲ့ ညီမလေးကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ သမီးအလိမ္မာလေးတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေ တော်တော်များများနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခဲ့တာကတော့ ခရီးတွေသွားလိုက် ရေတွေကူးလိုက် ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ ဆေးရုံတက်လိုက် အစရှိတဲ့ ကိစ္စတွေတော်တော်များများကြောင့် မီဒီယာစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာသူမရဲ့သတင်းတွေက အမြဲဆိုသလိုတွေ့ရတတ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ Instagram ပေါ်မှ ပုံတချို့ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပြီး မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေလို့လည်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် ရွှေမှုန်လေးရေ…….
Photo Credit: Shwe Mon Yati Instagram
အသကျ၂၀ ပွညျ့ပွီဖွဈတဲ့ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ရှမှေုနျရတီ
ရှမှေုနျရတီ ဟာ လူမှုကှနျရကျ Facebook ထကျ သူမရဲ့ Instagram အကောငျ့ပျေါမှာ ပုံတှကေို ပိုတငျတာတှရေ့ပါတယျ။ သူမ ဟာ အသကျငယျတဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့လို့ အနုပညာအရညျအခငျြးကတော့ ဝါရငျ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျလိုသရုပျဆောငျပိုငျနိုငျတဲ့ မငျးသမီးတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျ။
ရှမှေုနျရတီ ရဲ့ အသကျ ၂၀ ပွညျ့မှေးနေ့ ကိုလညျး ဒီကနေ့ မလေ ၁၆ ရကျနမှေ့ာ အောငျဇမ်ဗူတောရကြောငျးတိုကျ တှငျ အလှူပွုလုပျခဲ့တယျလို့လညျးသိရပါတယျ။ ရှမှေုနျရတီဟာ မိခငျဖွဈသူနဲ့ ညီမလေးကို ကွညျ့ရှုစောငျ့ရှောကျပေးနတေဲ့ သမီးအလိမ်မာလေးတဈယောကျလညျးဖွဈပါတယျ။
မီဒီယာတှေ တျောတျောမြားမြားနဲ့ အကြှမျးတဝငျဖွဈခဲ့တာကတော့ ခရီးတှသှေားလိုကျ ရတှေကေူးလိုကျ ကနျြးမာရေးမကောငျးလို့ ဆေးရုံတကျလိုကျ အစရှိတဲ့ ကိစ်စတှတေျောတျောမြားမြားကွောငျ့ မီဒီယာစာမကျြနှာတှပေျေါမှာသူမရဲ့သတငျးတှကေ အမွဲဆိုသလိုတှရေ့တတျတာလညျးဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ Instagram ပျေါမှ ပုံတခြို့ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပွီး မှေးနမှေ့ာပြျောရှငျပါစလေို့လညျး ဆုမှနျကောငျးတောငျးပေးလိုကျပါတယျ ရှမှေုနျလေးရေ…….